Ungahamba kanjani usuka ku-PDF uye ku-JPG | Izindaba zamagajethi
Ungahamba kanjani usuka ku-PDF uye ku-JPG
U-Ignacio Sala | | Software, Izifundiswa
Amafayela e-PDF abe yithuluzi eliyinhloko ledijithali uma kuziwa ekwabelaneni ngemibhalo kwi-Intanethi, kungaba nge-imeyili, izinhlelo zokusebenza zokuthumela imiyalezo ... Amafayela ngefomethi ye-PDF, isifushaniso seFomethi Yemibhalo Ephathekayo, asivumele ukuthi sigcine ngaphakathi kwayo zombili izithombe nombhalo kanye yasungulwa yi-Adobe Systems iba yindinganiso evulekile ngoJulayi 2008.
Eminyakeni edlule, zonke izinhlelo ezisebenzayo, zombili iselula nedeskithophu, zinikela ngokuhambisana nalezi zinhlobo zamafayela, ukuze kungadingeki nganoma yisiphi isikhathi ukufaka uhlelo lokusebenza oluvela eceleni ukuze lukwazi ukufinyelela kulwazi oluqukethe. Kuya ngokuya kujwayelekile kulezi zinhlobo zemibhalo ukuba nezithombe. Uma ufuna ukwazi ungahamba kanjani usuka ku-PDF uye ku-JPG, ngezansi sikukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani.
Lapho siguqula amafayela ngefomethi ye-PDF yenze i-JPG, sinenqwaba yezinketho, kungaba ngezicelo ezithile noma ngezinhlelo zokusebenza okungenzeka ukuthi sizifakile kukhompyutha yethu kodwa lokho Besingazi ukuthi bangawenza lowo msebenzi.
1 Iya kusuka ku-PDF uye ku-JPG ngaphandle kokufaka izinhlelo zokusebenza
2 Iya kusuka ku-PDF iye ku-JPG
3 Iya kusuka ku-PDF iye ku-JPG ku-Windows
3.1 I-PDF iye ku-JPEG
3.2 I-PDF ezithombeni
4 Iya kusuka ku-PDF iye ku-JPG ku-Mac
4.1 Ukubuka kuqala
4.2 I-PDF kuJPG
4.3 Isazi se-PDF
Iya kusuka ku-PDF uye ku-JPG ngaphandle kokufaka izinhlelo zokusebenza
Akuwona wonke umuntu ozimisele ukufaka uhlelo lokusebenza uma kuphela kufanele badlule kule nqubo yokuguqula ngezikhathi ezithile. Ngalawa macala, yize inqubo ingahle ihambe kancane ukuthi uma sikwenza eqenjini lethu, kuyindlela engcono kakhulu esinayo. Futhi kumahhala ngokuphelele.
Ngaleli gama lokwazi sithola enye yezinsizakalo ezihamba phambili ze-inthanethi ukuvula amakhasi ayingxenye yombhalo ngefomethi ye-PDF iye ku-JPG ngokuzimela. Inqubo yokukwenza ilula kakhulu, ngoba kufanele sihudule ifayela ngefomethi ye-PDF ekhasini lewebhu ukuze ifayela le- inqubo yokuguqula.
Kepha ngaphambili, I-IlovePDF isivumela ukuthi sikhethe ukuthi siyayifuna yini ukuthi ikhiphe ngokuzenzakalela kuphela izithombe ezikufomethi ye-JPG, noma iguqulele ikhasi ngalinye ku-JPG, inketho enconyiwe. Lapho sesikhethe inketho oyifunayo, chofoza ku Guqulela ku-JPG.
Olunye lwezinsizakalo zewebhu ezinhle kakhulu ezisivumela ukuthi sisuke ku-PDF siye ku-JPG ngaphandle kokufaka izinhlelo zangaphandle I-Smallpdf. Le sevisi isivumela ukuthi sisebenzise amafayela ngefomethi ye-PDF atholakala igcinwe ku-Google Drayivu noma ku-Dropbox, ngaphezu kokusobala eqenjini lethu.
Lapho sesikhethe ifayili, i-Smallpdf isinikeza izinketho ezimbili: Khipha izithombe ngawodwana noma Guqula wonke amakhasi. Kuyalulekwa ngaso sonke isikhathi ukukhetha le nketho yokugcina uma singafuni ukuphinda inqubo futhi, ngoba ukutholakala kwe-algorithm akuvamile ukwenza umsebenzi wayo kahle uma izithombe zinezindawo ezinemibala ekhanyayo.
Iya kusuka ku-PDF iye ku-JPG
Abahleli bezithombe, njenge I-Adobe Photoshop, iPixelmator noma i-GIMP, ayisivumeli nje kuphela ukuhlela izithombe, kepha futhi isivumela ukuthi sihlele amafayela ngefomethi ye-PDF ukuze kukhishwe, ngekhwalithi ephezulu kakhulu, izithombe ezingaphakathi. Lapho uvula ifayela ngefomethi ye-PDF, okokuqala umhleli uzosibuza ukuthi yiliphi ikhasi esifuna ukulivula, elingenza le nqubo ibe yisicefe uma inani lezithombe elizokhishwa liphezulu kakhulu.
Iya kusuka ku-PDF iye ku-JPG ku-Windows
I-PDF iye ku-JPEG
Enye ye izicelo ezinhle kakhulu esinayo eSitolo SeMicrosoft yi-PDF to JPEG, uhlelo olutholakala mahhala ngaphandle kwenkokhiso. Ukusebenza kohlelo lokusebenza kulula kakhulu, ngoba kufanele sikhethe kuphela ifayela le-PDF noma amafayela bese uchofoza ku-Guqula ukukhipha zonke izithombe ngefomethi ye-JPEG.
Landa i-PDF ku-JPEG
Enye indlela esinayo eSitolo seMicrosoft yi-PDF to Images, isicelo samahhala esivumela thina khipha izithombe kusuka kumafayili e-PDF ku-batch, okuzosivumela ukuthi songe isikhathi esiningi uma inani lamafayela e-PDF esifuna ukukhipha kuwo izithombe liphezulu kakhulu.
Landa i-PDF ezithombeni
Iya kusuka ku-PDF iye ku-JPG ku-Mac
Ukubuka kuqala uhlelo lokusebenza lwamahhala olutholakala kuzo zonke izinhlobo ze-macOS, uhlelo lokusebenza olusivumela ukuthi senze inani elikhulu lemisebenzi kwezinye izinhlelo zemvelo ezidinga izinhlelo zangaphandle. Enye yazo kungenzeka ukwazi dlulisa izithombe ze-PDF ku-JPG, ukuze ukwazi ukuwahlela ngokuhamba kwesikhathi noma wabelane ngawo.
Ukusebenza kwalolu hlelo lokusebenza kulula kakhulu. Okokuqala kufanele sivule idokhumenti ngefomethi ye-PDF ngalolu hlelo lokusebenza. Okulandelayo, chofoza ku Faka kungobo yomlando bese sikhetha Thumela.
Okulandelayo, sikhetha ifomethi esifuna ukugcina kuyo amashidi ayingxenye ye-PDF, kulokhu i-JPG, silungisa ikhwalithi yesithombe bese uchofoza ku-Gcina. Le nqubo izokwakha ifayela leshidi ngalinye eliyingxenye yedokhumenti ngefomethi ye-PDF.
Ngokuhlola kuqala okutholakala kuma-macOS, singashesha ukwenza le nqubo yokuguqula ukukhipha izithombe kepha ngawodwana, asikwazi inqubo yenqwaba, ngakho-ke asikwazi ukwenza le nqubo ngenombolo enkulu yamafayela ngasikhathi sinye.
Kulolu hlobo lwamacala, ku-Mac App Store sithola uhlelo lokusebenza lwe-PDF kuya ku-JPG, uhlelo lokusebenza ukuthi isivumela ukuthi sisuke ku-PDF siye ku-JPG ngamaqoqo wamafayela, ngaphandle kokusebenzisana nohlelo lokusebenza ukufaka amafayela amasha ukwenza ukuguqulwa.
I-PDF ku-JPG - Isiguquli seqoqo1,99 €
Isazi se-PDF yithuluzi elihle kunazo zonke esinalo ngaphakathi kohlelo lwe-Mac ukuze sisebenze namafayela ngefomethi ye-PDF. Lolu hlelo lokusebenza alusivumeli nje kuphela khipha izithombe kumadokhumenti ngale ndlela, kepha futhi ivumela ukuthi siguqule i-PDF ngendlela esiyithandayo.
Lolu hlelo lokusebenza luyindlela engcono kakhulu esinayo uma sifuna ukuthola izithombe zamafayela akule ndlela ngesinqumo esiphezulu kakhulu, ngoba singasikhipha ngqo ngaphandle kokwenza noma yiluphi uhlobo lokuguqulwa. Into ebi kakhulu ngalolu hlelo lokusebenza, ekususeni isici yinani: ama-euro angu-89,99. Ngokunengqondo lolu hlelo Yenzelwe labo basebenzisi abafuna ukuthola okuningi kule fomethi yefayela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Izifundiswa » Ungahamba kanjani usuka ku-PDF uye ku-JPG
Izindlela eziyisithupha zokukhulula isikhala ku-iPhone yakho
ISonos yethula lonke uhla lwayo lwezikhulumi ze-premium eJapan